Timaha ka soo baxo hoos markay bataan kacsiga ayay dhib u keenaan. - Hablaha Media Network
Timaha ka soo baxo hoos markay bataan kacsiga ayay dhib u keenaan.
HMN:- Timaha hoose marka ay bataan waxay yareeyaan kacsiga nimanka iyo naagahaba, sida la sheegay waxaa habboon shuunka in layska xiiro.
Marka meesha la xiiro waxay yeelanaysaa dareen oo saamayn kara kacsiga, xiiritaanka ayaa ka fiican jaritaanka, laakin marka ay timaha hoose aad u bataan meesha waxay noqonaysaa meel qurmuun oo ur leh, siiba haweenka.
Sidoo kale mantiqada ka sareeya xubinta taranka ee ay tinta ku daboolan tahay (meesha tininta bisiqda ka soo baxdo) oo ay ku jiraan qadar baruur ah iyo sidoo kale xididada kacsiga aad ayay uga helaan haweenka oo kacsi xadkiisa ka baxay ayay ka helaan .